Ny fitsangatsanganana any Eropa dia mandeha an-tongotra mankany amin'ny tanànan'ny lapa, ala, sy ny toetra tsara indrindra sy riandrano mahafinaritra indrindra. Na mitsangatsangana mankany Italia na Suisse ianao, drafitra a 2 fitsangatsanganana Euro volana, na mba manana herinandro iray ho an'ny firenena eoropeana iray fotsiny,…
Ny fijanonana amin'ny endriny mandritra ny dia dia tsy misy fisalasalana fanamby. Sakafo eo foana ny sakafo. Nifangaro taminà fiatoana amin'ny fanazaran-tena fanazaran-tena izay matetika mitarika amin'ny fianjeran'ilay sarety ara-batana. Ahoana no fomba hijanonan'ny iray mitoetra mandritra ny dia? izany…
Ho an'ny fianakaviana amin'ny ankizy, Moto miaraka amin'ny ankizy eo amin'ny fiaran-dalamby na dia mety ho mahafinaritra sy takatry ny fomba dia lavitra. Izany koa angamba ny tena aina sy saina kely indrindra ianao, rehefa mandeha miaraka amin'ny ankizy. Fantatsika mandeha amin'ny ankizy dia sarotra na inona na inona…